XOG: Ra’iisul Wasaare Rooble oo socdaal ku tegaya Kismaayo iyo arrimaha uu kala hadlayo Axmed Madoobe.
Puntlandtimes (Kismaayo)-Ilo xogagaal ah oo katirsan xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegaya in Mudane Maxamed Xuseen Rooble uu socdaalkiisii ugu horreeyey ku tegi doono magaalada Kismaayo oo caasimad kumeel gaar ah u ah maamulka Jubbaland.
Safarka Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda xil-gaarsiinta ee Soomaaliya ku tegayo magaalada Kismaayo ayaa lagu sheegay in ay tahay arrimo la xariira doorashada Soomaaliya iyo dhameystirka heshiiskii laga gaaray doorashada Soomaaliya ee 2021.
Ra’iisul Wasaare Rooble iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa waxa ay ka wada hadli doonaan dhammaystirka waxyaabaha suurta gelin kara in Garbohaarey ay ka qabsoonto doorasho nabad ah, kadib heshiiskii dhowaan lagu gaarey magaalada Muqdisho.
Shirkii dhowaan ka qabsoomay Teendhada Afisyoone ee magaalada Muqdisho ayaa lagu go’aamiyay abuurida guddi dib u heshiisiineed oo ka kooban dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo aysan ku jirin Jubbaland, guddigaas oo lagu soo magacaabayo 3 maalmood gudahood oo ka bilaabanaysay xilligii heshiiska la saxiixay.
Kumaqasbana cidina waala ogyahayfarmsajo iyo rooble waxay yihiin
AXMED MADOOBE IYO SACIID DENNI waa hogaamiyaasha rasmiga ah ee maantay jooga. Ilma Gareen, ee Laftagreen, guudlaawe gareen, iyo qoorqoor gareen, siyaasadooda waxaa weeyee maxaan cunaa, maxaan bililiqaysta…
Waxaas oo dhan waxaa ka darran FARMAAJO oo masaarufay.. 1 (hal) dollar ma haayaasto..
Rooble waa ogaadeen ah kismaayo waa magaaladisi adeerkii ayuu lakulmayaa